ईच्छविपरित नियुक्त गरिएको भन्दै डा.श्रेष्ठद्धारा महानिर्देशक बन्न इन्कार – NamoBuddha Khabar
ईच्छविपरित नियुक्त गरिएको भन्दै डा.श्रेष्ठद्धारा महानिर्देशक बन्न इन्कार
आइतबार, फाल्गुण ०६, २०७४ | १३:१५:०८ |
काठमाण्डौं,०६ फागुन :
स्वास्थ्य सेवा विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक डा. विनोदमान श्रेष्ठले पदवहाली गर्न इन्कार गर्नुभएको छ । उहाँले व्यक्तिगत कारण भन्दै विभागको महानिर्देशक बन्न इन्कार गर्नुभएको हो । गत बुधबार विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठले आईतबार विभागको महानिर्देशकको पदवहाली गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । विभागको महानिर्देशकमा १२ औ तहका कर्मचारी रहने प्रावधान छ ।
विभागको महानिर्देशक बन्न डा. राजेन्द्रप्रसाद पन्त र डा. तारानाथ पौडेलबीचको विवाद भएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले डा. श्रेष्ठलाई गत फागुन २ गते महानिर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । आफ्नो इच्छा विपरीत विभागको महानिर्देशक बनाएको भन्दै डा. श्रेष्ठले विभागमा हाजिर गर्न नमानेको बताइएको छ ।
उहाँले आगामी दिनमा पनि आफू विभाग जाने वा नजाने निश्चित नभएको बताउनुभयो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहराले जादाजादै स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका निकायमा निर्देशक फेरवदल गर्नुभएको थियो । मन्त्री बोहराले गत फागुन २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गोप्य रुपमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशक फेरबदल गर्नुभएको हो ।